မေစစ်ပိုင်| December 10, 2012 | Hits:1
| | ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြို့တွင်း မြင်ကွင်းတခု
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဘယ်အချိန်အထိ ဧည့်စာရင်း တိုင်နေရဦးမှာလဲစည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်မှု ၁ လ ဒဏ်ငွေ ၃ သိန်းကျော်ရဂျပန်က ချေးငွေ ၅ ဘီလီယံကို မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်ရန်သာ သုံးမည်ဟု ဆိုရန်ကုန် လမ်းဘေးဈေးသည် တွေကို ဒဏ်ငွေတပ် အရေးယူနေ ဟုဆို
MM December 10, 2012 - 9:22 pm ပြည်သူတွေအတွက် ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပဲ မြန်မာအစိုးက လက်ခံသင့်တာပေါ့။
Reply tunwin December 10, 2012 - 9:54 pm စိတ်ကူးမယဉ်ပါနှင့်
Reply Shwe Yoe December 11, 2012 - 12:38 am Come on! We do not even know who Philip Maung is. He may act likeabig fish fromabig pond. We never see his name in the news media in San Francisco.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 11, 2012 - 3:08 am ဘာလဲ ညီအမ မြို့ဆိုတာ။ မကြားဘူးသေးလို့ ရှင်းပြပါဦး။
Reply မောင်ပျာလောင် December 11, 2012 - 5:06 am ဂေး အိုလန်ပစ်တွေ ဆန်ဖရန်စစ္စကို မှာလုပ်ခဲ့သလို၊ ရန်ကုန်မှာလည်း လုပ်ဦးမှားလား အကို၊
Reply arthit December 11, 2012 - 11:55 am ဆောင်းပါးမှာပါသလို လမ်းဘေးဈေးသည်များစနစ်တကျရှိစေရေး ၊ ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ရှင်းလင်းရေး ၊ ရေမြောင်းပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်စနစ်များရှိစေရေး ၊ ငလျင်ဒဏ်ခံအဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ရေး ၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေးဗဟုသုတများ ရရှိစေရေး အစရှိသည့်အချက်များသည် ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့တော်အတွက် အလျင်အမြန်လိုအပ်နေသောအချက်အလက်များ ဖြစ်ပေသည် ။ နိုင်ငံတကာမြို့တော်များအဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် အတွက် ယင်းကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံရှိသူများထံမှ နည်းပညာအကြံဥာဏ်များ ရယူဖို့လိုအပ်လှပေသည် ။ အရာရာတွင် နိုင်ငံခြားသားဆိုပါက ငါတို့အပေါ်လူလည်ကျမှာလား ။ ငါတို့အပေါ်က အမြတ်ထုတ်ဖို့လာတာလား ။ ငါတို့ကို ခေတ်သစ်ကိုလိုနီပြုချင်လို့လား စတဲ့ ခေတ်ဟောင်းစနစ်ဟောင်းအတွေးအခေါ်တွေ ၊ စစ်အစိုးရအိုင်ဒီယာအဟောင်း တွေ ၊ ဦးနေဝင်း အကြွင်းအကျန်အိုင်ဒီယာဟောင်းတွေကို စွန့်လွှတ်သင့်ကြပေသည် ။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 12, 2012 - 3:45 am ငါတို့ အပေါ် လူလည်ကျမှာလား၊ အမြတ်ထုတ်ဘို့ လာတာလား ဆိုတာက နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်သား ဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်စွာနဲ့ မေးရမှာပါ။ အပေါ်က (Shwe Yoe) မေးထားသလို ဖိလစ်မောင် ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်လို အောင်မြင်တဲ့ (အချို့ အမြင်ကတော့ ဖျံကျခဲ့တဲ့) စီးပွားရေးသမားလဲ ကြားထားဘူးတာလေး ရေးပါမယ်။ အမေရိကားမှာ ဆူရှီး လုပ်ငန်းရှင် တချို့ဟာ အမေရိကန် ဈေးဆိုင်တွေမှာ ဆူရှီးရောင်းတဲ့ ကောင်တာလေး ပေးပါ။ ဘယ်လောက် ပေးပါ့မယ် ဆိုပြီး ဈေးညှိနှိုင်း၊ ဆိုင်လေး ဖွင့်ပြီး ဆူရှီးခေါ်တဲ့ ဂျပန်အစာတွေ ရောင်းကြတယ်။ အချို့ဆိုင်တွေ အောင်မြင်ပေမယ့် အချို့နေရာတွေကတော့ ဆိုင်လည်ပတ်နိုင်ရုံ အသင့်အတင့်ပေါ့။ အချို့ရပ်ကွက်က အဖြူတွေက လုံးဝ အားမပေး၊ မကြိုက်ကြတော့ အရင်းပြုတ်၊ အရှုံးပိုက်ရတဲ့ ဆူရှီးသမားတွေလဲ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုထိုသော သူများဟာ မိမိတို့ဘာသာ သုညဘ၀ အောက်ခြေကစလို့ ဆူရှီးဆိုင် ထောင်ခဲ့ကြတာ။ ဖိလစ်မောင် လုပ်တဲ့ ပုံစံက အစကနေ မစဘူး။ ဆူရှီး ဆိုင် တဆိုင် အောင်မြင်သွားမှ အဲသည် အမေရိကန်ဈေးကို လူပိုင် လူနိုင်တွေနဲ့ ကပ်ပြီး၊ ပေးသင့်သူကိုလဲ ပေးသင့်သလောက် ပိုပိုသာသာ ပေးပြီး (ဗမာပြည်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လျှောက်သလို) သူ့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရင် ဘယ်လောက် ပိုပေးမယ် ၀င်ယူတာ။ သူများ တည်ထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်ကို အပိုပေး ဖြတ်အုပ်တာ။ စီးပွားရေး လောကဆိုတာ သည်လိုပဲ ဆိုပေမယ့် သူများ ထမင်းအိုးခွဲပြီး ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် နေရာယူချင်တာတော့ မနှစ်မြို့ဘူး။ သည်အခြေအနေကို ကြည့်ရင် သူခေါ်လာမယ့် ဆန်ဖရန်က မြန်မာစီးပွားရေးသမားတွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ မှန်းကြည့်နိုင်တယ်။ ဆန်ဖရန်မှာ မြန်မာဆိုတာ ၈၈နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာသူက လွဲရင် ကျန်တာ တရုပ်ချည်းပဲ။ ဗမာလိုတောင် ၀ဲတဲတဲ နည်းနည်းပဲ ပြောတတ်သူတွေ။ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးသမား ဆိုတိုင်း အထင်မကြီးပါနဲ့။ တေဇ ကို အထင်ကြီးကြသလား။
Reply k.soe2012 December 11, 2012 - 5:35 pm ရွေမန်းတင်မောင် ရဲ့ ဇတ်ထဲက စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ “ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာဌုရယ်”။
Reply Myanmar December 18, 2012 - 8:04 pm I wonder why we r waiting, asking for others’ help and act… let’s change ourslelf, carrry ourslelf, do ourself … but it is the most difficult thing to start and do …coz we ( over 60 million ) were used to live wrongly for more than 40 yrs. But if we really want to… lets start today ,nothing can stop us… and dont wait other.. understand that biggest issue is some powerful citizens are seems like … dont want to , or dont dare to, or…